Ahlu-sunna oo Loo Saxiixay in 20 Xildhibaan Ku Yeelato Galmudugta Cusub – Goobjoog News
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa lagu sheegay in xildhibaannaasi ay qeyb ka yihiin 89-ka xildhibaan ee guud ahaan golaha uu ka kooban yahay iyada oo xilheyntooda ay ku egtahay muddada xilheynta baarlamaanka cusub.
Dhinaca kale, waxaa heshiiskan soo dhoweeyey xildhibaan Mahad Salaad isaga oo bartiisa Faceboogga ku soo qoray “Waxaan soo dhawaynayaa heshiiska laga gaaray kala aragti duwanaanshihii dowlada federaalka iyo Ahlu Suna ee dhismaha Galmudug.
“Waxaan u mahadcelinayaa Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo waqti badan geliyay sidii arintaan loo xalin lahaa. Waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa Wasiirka Arimaha Gudaha, Xildhibaanadii iyo Ganacsatadii ka shaqeeyay in uu miro dhal noqdo heshiiska maanta la gaaray”.
Guddiga doorashada Galmudug ayaa ku guuldareystay jadwalka iyada oo todobaadkan ay aheyd in ay socoto xulista xildhibaannada si ugu dambeyn ay doorashada madaxtinimada u dhacdo 23-ka bishan.
Dhageysi: Barnaamijka “The Next Economy” Ee Ganacsiyada Yar-yar
viagra worldwide viagra manufacturer viagra in canada [url=h...
generic viagra cialis paypal viagra and cialis discount cial...
cialispills online cialis on line sell cialis online 2nd day...
cheap cialis uk cialis overnight cialis without a prescripti...
generic vs brand name cialis viagraorcialis cialis dapoxetin...